Shiinaha Wareegtada Warshadda DC Fan iyo saarayaasha | Cunitaanka
Awood (Max) 22W
Midab Madow, Caddaan, Cagaar
Cabirka 330 * 320 * 516/930 （mm）
Cabbirka cabbirka 365 X 319 X 400 (mm)
Miisaanka saafiga ah 4.3KG
Duulinta 90 °
Xulashada Xawaaraha 9 xawaare oo 5 qaab ah
Guddiga Xakamaynta Taabashada taabashada
1. Xawaareyaal fara badan iyo dejinno
Dabaysha dabiiciga ah ee taageeraha wareegga caqliga leh waxay leedahay khibrad aad u wanaagsan oo aan dareemeyn madax-xanuun markii la afuufo muddo dheer, waana mid si xeel-dheer oo xeel-dheer loo muujiyey loona hoos mariyey shuruudaha bixinta hawada ee xaaladaha kala duwan, waxayna leedahay shan qaab oo maalin walba la kulma Qaab-dhismeedka xawaaraha 5 ee sida gaarka ah loogu talagalay: Caadiga, dabiiciga, hurdada, hooyada iyo uurjiifka, Habka ECO wuxuu la jaan qaadayaa doorbidyada la doonayo ee raaxada ugu habboon.
2. Bixinta xagal-ballaadhan-xagal-ballaadhan, dhiirrigelinta wareegga gudaha ee afar xilli
6 mitir oo hawo-masaafo dheer ah ayaa xawaareysa wareegga, marka loo isticmaalo xaaladda hawada, waxay sidoo kale hagaajin kartaa hufnaanta qaboojinta iyo kululaynta.
3. Kala wareejin badan oo keenta dabayl qabow
Waxaa xusid mudan in ay jiraan 15 nooc oo xaglo madax-ruxrux ah oo loogu talagalay safayr wareega wareega, kuwaas oo ah 10 °, 40 °, 100 ° kor iyo hoos, 30 °, 60 °, iyo 90 ° bidix iyo midig. Waxaa loo isticmaali karaa kor iyo hoos iyo bidix iyo midig, sidoo kale waxaa loo rogi karaa hal jiho. Si dabacsan ayaa loogu hagaajin karaa si loo daboolo baahiyaha qofka keliya ee afuufaya ama dhowr qof oo qaboojinaya.
4. Mashiinka DC-ga ah ee aamusnaanta badan, buuqa qaylada oo kaliya 11dBA
70% ka hooseeya taageere jira, aamusnaan iyo raaxo leh, ayaa ku siinaya hurdo fiican habeen dhan.
5. Laba-lakab lakab 15 naqshadood oo hawo fan ah
Waxaa loogu talagalay 9 garbaha dibedda ah iyo 6 garbaha gudaha, laba-lakab 15 hareeraha marawaxadaha, mugga hawada ee ay soo saaraan baalalka weyn ee taageeraha ayaa qiyaastii 1.8 jeer ka badan wareega hoose ee daab yar, iyo qallooca baalasha marawaxada ayaa la habeeyay la hagaajiyay, taas oo aad ugu habboon laba xawaare dabayl oo kala duwan. Qulqulka hawada ayaa isku dhafan; oo ka duwan taageerayaasha dhaqameed iyo taageerayaasha kale ee wareegga hawada, kaneecada kaneecada wax ku celisa ee socodka caqliga leh ayaa leh masaafad dheer oo dabayl ah, aag ballaadhan oo dabayshu leedahay, iyo hawo jilicsan. Sida xeeb gacmeed, waxaa lagu salaaxaa dabayl khafiif ah, oo ku habboon waayeelka, dadka jir ahaan xasaasiga ah.
6. Fudud oo loo isticmaali karo miiska.
Waxaa loo isticmaali karaa miiska iyo sagxadda labadaba. Dhererka labada noocba marar badan baa la tijaabiyay oo lagu hagaajiyay dhererka ugu fiican ee ku habboon isticmaalka maalin kasta ee dadka. 93cm taageerayaasha dabaqa iyo 51.6cm taageerayaasha miiska. Hadday fadhida fadhiga, aqrinta buug, cunugga oo la ciyaaraya rooga, ama sariirta jiifa, waxaa kuu furan xagal kuu roon.
7. Kaneecada kaneecada
Kaneecada kaneecada saliida lagama maarmaanka ah waxay kudhex jirtaa hawo xoog leh oo baaxad leh oo faafinaysa, kala duwanaanshaha kaneecada ayaa kaweyn. Iyada oo leh hawo-qaadista madaxa-ballaaran ee dhaqaaqa leh, waxaa loo qaadi karaa gees walba oo guriga ka mid ah, si qoyska oo dhami ugu raaxaystaan ​​xagaaga qabow ee aan kaneecada qaniinin.
8. Shaashad taabasho HD cusub
Saldhiggu wuxuu adeegsadaa shaashadda taabashada ee otomaatiga ah ee PC HD, taas oo ka duwan badhannada dhaqameed. Waa wax fudud oo casri ah Iftiinka waa jilicsan yahay oo ma dhalaalayo. Shaashadda ayaa si otomaatig ah u demin doonta 10 ilbidhiqsi gudahood hawlgal la'aan.
Hore: Tower Air Multiplier Bladeless Fan
Xiga: Mashiinka aan nadiifka ahayn ee daahiriya
Wareegga Hawada Dc Fan
Bldc Taageeraha Lugaha
Taageeraha Dc Motor
Taageeraha istaaga Dc